Haween Qoortooda 10-Kii Sanaba Mar Kaliya Arka Inta Noloshooda Ka Dhimana Bir Weyni Qoorta Ugu Maran Tahay!!! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Haween Qoortooda 10-Kii Sanaba Mar Kaliya Arka Inta Noloshooda Ka Dhimana Bir...
Caadooyinka layaabka leh ee ay ku dhaqmaan kuna kala duwan yihiin shucuubta adduunku waa kuwo aan wali mar kali ah tiro-koobyo rasmi ah lagu samayn lana ogaan qaar badan oo ka mid ah. Ummad kasta oo dunida ku nooli waxa ay leedahay hab nololeed iyo caadooyin u gooniya oo ay dadka kale kaga duwan yihiin. Ummaduhu sida ay u kala caqiido xun yihiin ayay caadoyinkooduna u kala yaab badan yihiin. Arrinta xiisaha leh ee aan qormadan kooban ku soo qaadanaynaa maanta waa caado dhaqameed layaab leh oo ay ku dhaqmaan qabaa’il lagu magacaabo Alkayan oo ku nool badhtamaha waddanka Thailand ee ku yaalla qaaradda Asia waana qabaa’il duud gal oo ku nool dhulka kaymaha ah ahna beero qodato.
Qabaa’ilkaasi haweenkoodu waxa ay leeyihiin caado layaab leh oo dhinaca is qurxinta ah oo ay iyagu u arkaan in ay tahay muuqaal sharaf iyo qurux badan oo ay haweenka kale ee adduunka dheer yihiin waana iyaga oo haweenka qabaa’ilkasi qoorta ku xidha biro lakabyo ah oo isa saaran oo qofka lagu taxo si ay haweenaydu u noqoto mid qoor dheer. In haweenaydu lahaato qoor dheer oo aad u dheer ayaa ah caadada haweenkani leeyihiin oo ay u arkaan quruxdii ugu dambaysay ee haweenayda si ay arrinkaasi u gaadhaana waa in ay haweenaydu xanuun kasta u marto in ay qoorteedu dheeraato. Qabaa’ilka Kayan waxa lagu qiyaasaa 200 oo kun oo qof waana dad tiro yar marka loo eego qabaa’ilka kale ee dalka Thailand, waxaanay asalkoodii hore ka soo haajireen Myanmar. Haweenkani waxa ay qoortooda ku duubaan bir naxaas ah oo la wareejiyey iyaga oo qoortooda ku giijiya si laalaab ahna ugu wareejiya si ay qoortu u dhisanto oo ay u dheeraato, taasi oo xanuun badan ku keenta haweenayda. Caadadan waxa inanta lagu bilaabaa iyada oo aad u yar si ay ula korto birtan dhan ee qoorta loogu duubayo sidaasaanay abidkeed ugu xidhnaataa qoorta iyada oo la sheego in haweenayda loo oggol yahay in 10-kii sanaba mar kali ah birtan laga furo kadibna mid cusub lagu maro. Inantu iyada oo jirta 5 sanadood ayay birtan ku duubaan sidaasaanay 10-kii sanaba mar ku aragtaa qoorteeda iyada oo aan wakhti kale loo oglayn in ay iska furto. Khubaro arrinkan baadhitaan ku sameeyey ayaa sheegaya in qoorta ay haweenkani moodayaan in ay dheeraatay aanay ahayn sidaasi balse ay tahay in lafaha kalxamaha iyo guud ahaan saablaydu hoos u soo dhacaan culayska birta lagu xidhayo gabadha yar darteed iyo sannadaha badan ee ay xidhan tahay waxaanay birtaasi culusi hoos u kala jiidaysaa jidhka intiisa dhexe gaar ahaan garbaha, lafaha kalxamaha iyo saablayda halka madaxu isna kor u xidhan yahay taasi ayaa keenaysa in qoortu dheeraato haweenayda. Haweenka ayaa sheega in tobanka sano ee ugu horreeya ay xanuun badan dareemaan balse intaa wixii ka dambeeya ay la qabsadaan. Sidaasina haweenaydu ahaanayso inta nolosheeda ka dhiman oo ay qoorteeda birahaasi ku duubnaanayaan arrinkaasi oo ay u arkaan qurux. Dalxiisayaasha dunida isaga kala yimaad ayaa soo booqda goobaha ay haweenkani joogaan.
Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi: Ma Addis Ababa Ayuu Socdaalkiisa U Horeeya Ku Tagi Doonaa Mise Djibouti?
Ku Cibro Qaado: Waxa Uu Ku Riyooday Malaggii Nafta Qaadayay Ee Cazraa’iil Maalin Kadibna Waxa La Soo Sheegay Geeridiisa!!